तर, अझै पनि इन्स्टाग्राममा उनको तस्वीर हेर्दा लाग्छ – म उनकै काखमा लडीबुडी खेल्दैछु!
मैले एकटकले उनलाई हेरिरहेँ। आँखै नझिम्काई। त्यसबेला कसैले मलाई मायालु स्वरमा हपारे झै लाग्यो – मलाई भेट्न आउन यतिका वर्ष किन लायौँ?
कसको स्वर थियो त्यो? मैले मुन्टो घुमाएँ। वरपर कोही थिएन। के त्यो कञ्चनजंघाको स्वर थियो?
विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८ मिटर) भन्दा २६२ मिटरमात्रै होचो छ – कञ्चनजंघा (८,५८६)। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल केटू (८,६११ मिटर) भन्दा त कञ्चनजंघा २५ मिटरमात्रै होचो छ।
थिवामा बिहानको खान खाएर हामी हिँडिहाल्यौँ। हाम्रा खुट्टाहरू पदयात्राका लागि आतुर थिए। तेस्रो रात सेकाथुम पुग्यौँ। यहाँबाट दुइटा बाटा छुट्टिन्छन्। एउटा बाटो चीनको सीमामा पर्ने ओलाङचुङ्गोला पुगिन्छ। हामीलाई चाहिँ अर्को बाटो हिँडेर कञ्चजनजंघाको उत्तरी आधार शिविर (५,१४३ मिटर) सम्म पुग्नु थियो। र, त्यहाँबाट घुन्सा हुँदै ओरालो झरेर अलि पूर्व गई फेरि उकालो उक्लेर दक्षिणी आधार शिविर (४,५०० मिटर) समेत पुग्नु थियो।
चौथो दिन हामी बेलैमा अम्जीलोसा पुग्यौँ। त्यहाँबाट अघि बढ्ने समय पनि थियो। तर, हामीले त्यो रात त्यहीँ बस्ने निधो गर्‍यौँ। हाम्राे निर्णय सही सावित भयो। किनकि, पाँचौ रात हामीले फलेमा बास बस्न पायौँ। प्रायः पदयात्रीहरू फलेमा होइन, घुन्सामा बास बस्दा रहेछन्। घुन्सा अलि बजारजस्तो छ। फलेमा भन्दा अलि सुविधा पनि पाइन्छ। तर, फलेमा पाइने कुरा घुन्सामा पाइँदैन । त्याे हाे–सत्कार।
अब फेरि कहिले कञ्चनजंघा पुगिएला? थाहा छैन। तर, कञ्चनजंघाका सुन्दर तस्वीरहरूले मलाई अझै पनि लठ्याउन छाडेका छैनन्।
काठमाडौंबाट भद्रपुरसम्म जहाजमा वा कोटेश्वरबाट बिर्तामोडसम्म गाडीमा। झापा पुगेपछि जिपमा ताप्लेजुङको फुङलिङ। त्यहाँबाट थिवासम्मै गाडी जाँदो रहेछ। तर, बाटो राम्रो छैन र गाडीमा मान्छे कोचिएको हुन्छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेलले सिफारिस गरेको रुट अनुसार धेरै ठाउँ बास बस्दै जाने हो भने काठमाडौंबाट ११–१२ दिनमा मात्रै कञ्चनजंघाको उत्तरी आधार शिविर पुगिन्छ। तर, हामी काठमाडौं छाडेको सातौ रातमै त्यहाँ पुग्यौँ । बिर्तामोड र फुङलिङमा एक–एक रात बिताएपछि सेकाथुममा तेस्रो, अम्जीलोसामा चौथो, फलेमा पाँचौ, खम्बाचेनमा छैटौं र लोनाकमा सातौ रात (हेर्नूस् म्याप)। लोनाकबाट एकदुई घण्टामै आधारशिविर पुगिन्छ। तर, विहानै उकालो नलागे आधारशिविर पुग्दासम्म कञ्चनजंघा बादलले ढाकिएको हुन्छ।
के लैजाने ?
कहाँ के गर्ने ?
फलेमा बास बस्न नबिर्सनुहोस् । त्यहाँ तिब्बती मूलका नेपालीको पुरानो बस्ती छ, जहाँ अर्गानिक खाना र न्यानो सत्कार पाइन्छ । होटल छैन । घरहरू पुराना छन् । तर, बाक्लो डसनामा न्यानो सिरक खापेर सुत्न पाए अरु के चाहियो?
यात्रा र फोटोग्राफीमा रुचि राख्ने मोहन दुवालका अन्य मनमोहक तस्वीरहरू हेर्न उनलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ । उनको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट हो : @mohgraphy
Published Date: Friday, 26th April 13:51:54 PM